eNasha.com - सानो हौसलाको ठूलो परिणाम
Home» Music »Feature
सानो हौसलाको ठूलो परिणाम
मान्छेको जीवनमा सानो हौसलाले पनि ठूलो परिणाम दिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्, रोशन भट्टराई । तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया गएका मोरङ जिल्लाका रोशनले सङ्गीतकर्मी चन्द्र लामाले स्वरको प्रशंसा गरेपछि उनी सङ्गीतकर्ममा होमिएका हुन् ।
कोरियामै बचेको समयमा गीतसङ्गीतमा ध्यान दिइरहेका उनले पहिलो गीत 'कस्ती तिमी...' कोरियामा नै रेकर्ड गरेका थिए । यो गीत कोरियामा आयोजन हुने विभिन्न सङ्गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा नियमित गाउँदै आइरहेका बेला उनको यो गीतलाई रुचाइएपछि अहिले पूरै एल्बम निकाल्ने तयारी उनले गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म सुजील कर्माचार्य, मनोज केसीलगायत अन्य सङ्गीत संयोजकहरुले उनका गीतलाई संयोजन गरिसकेका छन् । संयोजन गरिएका सङ्गीतलाई उनले कोरियाली रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गर्ने भएका छन् । उनको नाम राखिनसकिएको नयाँ एल्बममा आठ गीत रहने कोरियाबाट फोनमा इनशाडटकमलाई जानकारी गराएका छन् ।
मूलतः कोरियाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा नियमित रुपमा गायन र नृत्यमा सहभागी रहेका रोशनको यो एल्बम पप र आधुनिक मिश्रति एल्बम हुने उनले जनाएका छन् । उनलाई सफलताको शुभकामना !
गायक सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार तातोपीरो क्या बात ! कीर्तिमान नेपाली तारा उपलब्धि गायिका विचार भिडन्त अवार्ड प्रेम र विवाह पेज थ्री कन्सर्ट रुचि हल्ला
रियालिटी शो श्रृङ्खला भीडबाहिर हल्ला र वास्तविकता विदेशमा रमाइलो अभिनेता अभिनेत्री निर्माता नयाँपन भित्री कुरा
Tag groups: cinema, city sightings, city updates, fashion & grooming, health, misc, music, relationship, technology, television, weird & interesting,